Saxansaxadii Xoriyadda oo soo carfeysa ee ka qebqado iyo Qaranimada Soomaaliyeed | savanne forum
Cudduda Muqaawamada oo adag iyo rabitaankooda oo ku xidhan illaahey jidkiisa iyo waliba shacab daacad oo jecel oo iyaga u nugul waxey soo iftiimisey rajadaan ka qabo in Soomaliya markale ay calankeeda dib u qaadato nabad iyo barwaaqana ku waarto. Caasimadii Xamar ee burburtey waxaa gacantooda ku dhisan doona dadkii lahaa. Tigree dharbaaxada ku dhacaysa iyo dhafoor xumadoodu waxay sahayan doontaa Zenaaawi. Kenya edeb bay yeelan doontaa waxeyna markale si wanaagsan u furi doontaa xadkeeda. Muslimka geeska Afrika waxaa saldhig markale u noqon doona caasimadda Xamar.
Qurba joogta kuwoo waxsoo bartey iyo kuwooda u xiisey dhulkoodii waxey buuxin doonaan jasiiradaha quruxda san ee Liido iyo Aljazeera. Ganacsi iyo nabad buuxda waynu arki doonaa mar aan fogeyn. Dunidii ina dumisey mar aan fogeyn way inoo imaan iyadoo ku dhawaaqeysa anagaa idin gabney. Zenaawi waji gabax inuu la dhinto haddii aysan ciidamadiisu dilin waa la arkaa.
Tuugtii dadkooda gumaadey ee Tigree u raacey meel ay joogaanba tuke canbaar leh oo aan umadda ka mid noqon waa laga dhigi doonaa iyagaana is masaafurin doona. Idamka illaahay nabad waara iyo isjeceykeenii waan arkaa waana muuqdaa..
Qurbajoogta oo iyagu ilo dhaqaale u ah umadda waxey malaayiin ku bxiin doonaan dib udhiska waddanka. Khilaafaadka iyo aragtiyaha kala duwanna kolla inagama joojin doonaan inaan danteena iyo diinteenna u midawno. Culimada maanta duurka u hoyata iyo kuwa gacanta Tigreega ku jira mar aan fogeyn Tarbuunka way kala hadli doonaan malaayiin Soomaaliyeed oo u heellan araggooda. Dadkii barakacey guryahooda way imaan.
Ugu danbeyn, dhamaanteen waxaa ina faran inaan kaqaybqaadano dib u dhiska, iyo xoreynta waddankeena. Rag baa u dhimanaya maanta inteenna kalena aan taageero hiil iyo hooba kula tacaallo. Tigree waa JABAYAA,!